Mhinduro yekuvharwa kweCydia muIOS 9 | IPhone nhau
Pangu akatanga chishandiso chake kugadzira iyo jailbreak kune iOS 9 Uye, kunyangwe yakashanda mushe muzviitiko zvakawanda, vamwe vashandisi vakataura matambudziko ekumisikidza, matambudziko anofanirwa kugadziriswa, kana zvirinani kuti zviitike zvishoma, mushanduro 1.0.1 yechishandiso. Rimwe dambudziko nderekuti vashandisi vazhinji vanoona inovhara kana ichiedza kuvhura Cydia mushure mejeri kuputsa yako iPhone, iPod kana iPad. Kana iwe uri kusangana nekutadza uku, tevera matanho ari pazasi ari kushanda muzviitiko zvakawanda.
[UPDATE]: Iyi sisitimu haichashandi nekuti iOS 9.1 yakatoburitswa
Gadzirisa kuputika kweCydia muIOS 9
Isu tinoita backup yakavharidzirwa neTunes.
Tinodhawunirodha iyo iOS 9.0.2 .ipsw kubva pane yedu kifaa kubva getios.com
Isu tinoisa chishandiso muDFU modhi: 1- Isu tinobatanidza chishandiso kukombuta uye kuvhura iTunes, 2- Tinodzvanya nekubata yekutanga bhatani + kurara kwemasekondi gumi, 10- Isu tinoburitsa zororo bhatani uye tinobata yekutanga bhatani kusvikira isu ona meseji yekusimbisa muTunes.
Pakombuta yedu, tinodzvanya ALT paMac kana Shift paWindows uye tinya Dzoserai iPhone.
Kana tangodzoreredzwa, tinoita iyo jailbreak inotevera dzidziso yedu.
Mushure mekupunzika kwejeri, usati wavhura Cydia kekutanga, tinova nechokwadi chekuti ndege yemauto yadzimwa uye kuti takabatana neinternet. Ichi chikamu chakakosha. Zvirinani kuzviita zvakabatana ne Wi-Fi network.
Isu tinotanga Cydia uye tinomirira kuti iite zvizere. Hatifanire kubata chero chinhu kusvikira mutoro wapera. Iyo chishandiso inotangazve, asi zvakajairika.
Isu tinodzosera iyo backup, kana tichida.
Iyi nzira inoshanda kakawanda, saka kana iwe uchinge uine matambudziko, iyi ingangoita mhinduro. Usazeze kusiya mune zvakataurwa kana zvakashanda kwauri kana kwete. Nekudaro, Pangu anogona kuburitsa mamwe mavhezheni ekuvandudza chishandiso chezana muzana muzana yekubudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Cydia inopunzika painopunzika mujeri iOS 9? Edza iyi mhinduro
Kana zvaizobatsira chero munhu: Ini ndakangodzoreredza iyo iPhone zvakare, ndokumisikidza seyatsva, ndakaipaza mujeri, ndakatarisa kuti pakanga pasina matambudziko panguva ino, uye pakupedzisira ndikadzorera iyo backup. Yakandishandira uye iri nyore kuita pane inotsanangurwa naPablo (izvo zvandine chokwadi kuti zvinoshanda zvakare, asi kana paine chero munhu aida kuedza izvi kutanga, zviri nyore).
Mhoroi, Pablo !!!
Ini handisati ndavhunika, ini ndinoenderera paIOS 8.4 nekuti ini ndinosarudza kumirira iwo ma tweaks andinoshandisa kuti aenderane uye ndishande 100%. Ehezve ndanga ndichivandudza zvese zvinoonekwa muCydia uye ... Pakarepo chimwe chinhu chisingazivikanwe chakaitika kwandiri ... ndakagadzirisa mamwe ma tweaks uye ikozvino Cydia haivhure uye handizive kuti dambudziko nderei.
Chii chakaitika? Une mazano here kuti andibatsire kugadzirisa?
Shandisa iyo Pistachio Solution, uye hapana dambudziko Graxxx
Thanks Pablo, yakashanda zvakakwana.
Zvinondibatsira kana ndikavhura cydia asi zvinoita sekunge chitupa cheseva hachisi chokwadi chekuti ndiri kuwana cervidor inonyepedzera kunge cydia.saurik.com uye kuti ruzivo rwangu rukanganisike. Rimwe zano ndapota, hapana chandingaite cydia
Chinhu choga chandinogona kufunga nezvacho ndechekuti iwe unodzoreredza uyezve kugadzirisa kwejeri ... Uye kuti iwe utore Pangu software kubva kune yepamutemo webhusaiti uye hakuna kumwe kunhu.
Mhoroi, cydia inovhara pandinoyedza kuivhura, ndiri kuzodzorera asi kutanga ini ndoda kuziva kuti kana uchigadzira backup mumacrypts iwo asina-kutengwa kunyorera (kurodha pasi kubva vshare) yaizobviswa? sezvo ini ndine akati wandei kurodha pasi anotora yakawanda uye iri bummer kurodhaunirodha zvakare.
Ndinokutendai zvikuru uye kukwazisa.
Alejandro Rivadeneira akadaro
Itunes haibvumiri iwe kudzoreredza zvakajairwa kusvika 9.0.2 asi yakananga ku9.1
Nenzira imwecheteyo, kubva pane imwe nguva kuenda pane inotevera, pandinovhura cydia, iyo skrini inoramba isina chinhu uye mumasekondi matatu iko iko kuvhara kunovhara. Ese akaiswa tweaks anoshanda zvakajairika asi ini handikwanise kupinda cydia
Pindura kuna Alejandro Rivadeneira
Mhoro zvakanaka. Ini ndiri mutsva kune izvi kubva kuCydia. Ndine iyo Iphone 4s IOS 9.0.2 uye ini ndoda kuivhura. Ini ndaigara ndiinayo neRSim, asi pandinoimutsidzira kuna Ios 9.0.2 inova yechinyakare uye inomira kushanda. Zvino ini handizive zvekuita, ndinovimba mumwe munhu anoziva chinhu. Ndatenda
Mhoroi, mungangoda kufarira hunyengeri hwandakawana kuti ndibvise cydia chiuno, (chakaedzwa pane iPhone 6s Plus neIOS 9.0.2)
Zvakanaka izvo, yakaiswa zeppelyn uye iyo cydia chaos inotanga, uye ndinoshamisika kuti ndoibvisa sei kana ndisingakwanise kuvhura cydia!
Ini ndinodzima iyo iPhone ndobva ndaibatidza muna Exit Safe Mode (iine iPhone yakadzimwa nekutsikirira vol +, kusvikira apuro yanyangarika) uye voila Cydia inoshanda zvakare asi isina ma tweaks, bvisa iwo maTweaks ari kukunetsa uye woitangazve. Uye kuramba uchikanganisa kutenderera !!!!
Ndinovimba inokushandira iwe, kwaziso uye kupararira!
McHamer ndakazviita sekuratidzira kwawakaita uye walaaaa!
Yakashanda zvakakwana, maita basa kwazvo.
Icho chiri chokwadi ndatenda mchamber chakandishandira ini ndaive nematambudziko nekuda kwetweet uye ini ndaigona kuzvigadzirisa nekupinda yakachengeteka nzira